ဖြိုးပြောပြတဲ့ ဂျပန်အကြောင်းအရာ အပိုင်း(၁) - JAPO Japanese News
သော 28 Feb 2020, 16:05 ညနေ
မင်္ဂလာပါ အခုတစ်ခါကတော့ visaအမျိုးအစားနဲ့ပက်သက်ပြီးဖြိုးသိသလောက် ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်.
တော်တော်များများ pageတွေမှာလည်း sharing လုပ်နေကြလို့တော်တော်များများသိပြီးလောက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေ သိသွားအောင် ထပ်ပြီး sharing လုပ်ပေးချင်လို့ပါနော်
မြန်မာနိုင်ငံက အလာအများဆုံး visaလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ language school တက်ရင်းနဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကြရတာပါ။ visa.သက်တမ်းက ၂ နှစ်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်လား၊ မလုပ်လား၊ စစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင် ဂျပန်မှာပဲ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် 専門学校လို့ခေါ်တဲ့ သက်မွေးuniversityတွေမှာထပ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ချိန်ထက်ပိုလုပ်ရင် visa ထပ်မရဘဲ မြန်မာပြည်ကို မဖြစ်မနေပြန်ရပါမယ်နော်။ အခုနောက်ပိုင်း ဂျပန်မှာ student visa နဲ့လာတဲ့သူတွေများလို့ ကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့် visa ရဖို့အခက်အခဲရှိပါမယ်နော်
၂။ Training Visa
စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း အစရှိတဲ့အလုပ်တွေအတွက် visa ပါ။ Visa.သက်တမ်းကတော့ ၃ နှစ်ပါ။
၃။ Engineer Visa
မြန်မာပြည်ကအလာများတဲ့အရာတွေကတော့ programmer နဲ့ civil engineer အနေနဲ့အလာများကြပါတယ်။ တခြား EP ,EC နဲ့ MP ကျောင်းပြီးတဲ့သူတွေလည်း လာကြတာရှိပါတယ်။ visa သက်တမ်းကတော့ ကိုယ်လုပ်မယ့် company ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၁ နှစ်ကနေ ၃နှစ်နဲ့ ၅နှစ်သက်တမ်းပါ။ သူကတော့သက်တမ်းကုန်ရင် ဂျပန်က လဝကရုံးမှာပဲသက်တမ်းတိုးလို့ရပါတယ်။
၄။ Tokutei Visa
အခုမှအသစ် ထွက်လာတဲ့ visa ပါ။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေကတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Training Visa နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ သူက visa သက်တမ်း ၅ နှစ် ပါ။
၅။ နန်းမင်း Visa (Refugee Visa)
သူကတော့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် visa ပါ။
၆။ မှီခို Visa
အကယ်၍ ကိုယ့်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးက ဂျပန်မှာ(engineer)အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်က ဂျပန်လူမျိုး ဖြစ်နေရင်လျှောက်ခွင့်ရတဲ့visaပါ။
စတဲ့ Visa အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်။ ဘာနဲ့လာရမလဲ ဘယ်တွေလိုအပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပီး ဘာ Visa နဲ့ပဲလာလာပါ ဂျပန်စာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး N3 level လောက်ထိလိုအပ်ပါတယ်နော်။ ဂျပန်ကိုစလာဖို့ ဘယ် Agency ကောင်းလဲ? ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ? မေးနေကြတဲ့သူတွေအတွက် ဖြိုးအကြံပေးချင်တာကတော့ ဂျပန်စာကိုအရင်တတ်အောင်လုပ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း visa အသစ်တွေလည်းရှိလာပီဆိုတော့ ဂျပန်စာတတ်ထားရင် ဂျပန်လာဖို့လွယ်သွားပါပြီ။ ဂျပန်စာတတ်ထားတဲ့အတွက် အနည်းဆုံးမြန်မာမှာရှိတဲ့ ဂျပန် Company တွေမှာဝင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်တကယ်ဂျပန်လာချင်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ဂျပန်စာအရင်တတ်အောင်သင်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေနော်။ နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ ဖြိုးဂျပန်ကိုဘယ်လိုလာခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပက်သက်ပီး sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်နော်!!!!